ASUS bu n'obi ịbawanye ọnụọgụ ahịa ekwentị ya na 2017 | Androidsis
ASUS na-ele anya okpukpu abụọ nke ọnụ ọgụgụ ahịa ya na 2017
E nwere ọtụtụ ndị na -eme ihe nkiri n'ahịrị nke abụọ Kama nke ahụ, ha nọ na -arụ ọrụ n'azụ ihe iji kwadebe maka oge a na -atụkwasị ọkụ niile na ha ma nwee ike inye obi ha igosi na ha nwere ọtụtụ ihe ha ga -akụzi ma mee ka nde ndị ọrụ jiri ya mee ihe n'oge ahụ ha nwere ike banye n'ime igbe iji nweta otu n'ime ekwentị ha dị oke ọnụ ahịa.
Site na ọkwa ọkwa ASUS ZenFone AR na ZenFone Zoom 3, akụkọ ọhụrụ na -egosi na ASUS na -achọ ụzọ iji bulie ọdịnihu nke ọnụ ọgụgụ ya maka afọ ole na ole sochirinụ. Na 2016, ụlọ ọrụ ahụ rere 20 nde ama, ikpe mara nke a bụ ahịrị ZenFone 3 nke nyere ọmarịcha ahụ na -enweghị ịhapụ anya n'ihu ka ọ na -eme na ụdị ndị ọzọ.
ASUS ZenFone AR weliri isi ya na CES 2017 ịbụ onye mbụ ga -emecha ebumnuche abụọ dị iche iche. N'otu akụkụ, ọ bụ ekwentị mbụ nwere 8 GB nke Ram, na nke ọzọ, ikwekọ na atụmatụ Tango na Google Daydream. Ọ ga -abụ ọdụ nke nwere ike ọ gaghị eduga ahịa ụlọ ọrụ na 2017, mana Jerry Shen kwuru na a ga -ewepụta usoro ZenFone 4 na nkeji nke abụọ nke afọ a.
Ọ malitere na China n'oge na -adịbeghị anya ZenFone Pegasus 3S, ebe ụlọ ọrụ nwere ọnụnọ siri ike. Mana ọ bụ n'ezie ọdụ ụgbọ mmiri mbụ n'ime usoro ole na ole ga -anwa ime ka ụlọ ọrụ ahụ mụbaa ahịa site na 20% n'ahịa dị iche iche, nke ga -abụ uto 5% nke ụwa.
Yabụ na 2017 na -ese ihe dị ka ihe karịrị afọ na -atọ ụtọ na na -ahụbeghị ụfọdụ ọkọlọtọ kacha mkpa. Ana m alaghachi na paragraf ahụ na mbido, na -akwado ndị na -eme ihe nkiri nwere ike bụrụ akụkụ nke ihe nkedo maka afọ ole na ole sochirinụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » ASUS na-ele anya okpukpu abụọ nke ọnụ ọgụgụ ahịa ya na 2017
Dabere na AnTuTu, Samsung na-achị na United States na Xiaomi na ndị ọzọ